ट्विटर विज्ञापन Follow ०.0.823२XNUMX प्रत्येकमा अनुयायीहरू थप्दै Martech Zone
शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० आइतवार, फेब्रुअरी,, २०१ 10 Douglas Karr
सेप्टेम्बरदेखि हामी हाम्रो एउटा खातामा ट्वीटर अनुयायीहरू प्राप्त गर्न सानो बजेट चलाइरहेका छौं। यी छैनन् सशुल्क अनुयायीहरू, यो वास्तविक हो ट्विटर विज्ञापन लक्ष्यीकरण र अन्य प्रयोगकर्ताहरूमा खाता प्रमोट गर्दै। ट्विटर विज्ञापनले तपाइँलाई दुबै खाता प्रवर्धन गर्न वा ट्वीट्स प्रमोट गर्न अनुमति दिन्छ। हामीले भर्खरको परीक्षण गरेका छैनौं, तर खाता पदोन्नतिको नतीजा एकदम स्पष्ट र अनुरूप थियो।
यो खाता बिना ट्विटरको प्रमोशन को उपयोग गरेर करीव %०% छिटो बढ्यो। हामी 30 887 २ .729.81 .82.3१ को लागि XNUMX XNUMX अनुयायीहरू थपेका छौं - प्रति अनुयायी XNUMX२..XNUMX सेन्टको लागत। यो एक ब्रांडेड खाता हो, व्यक्तिगत हैन, र खाताको विवरण स्पष्ट र स्पष्ट छ - केही स्कर्की वा फेन्सी छैन। केहि नाटकीय छैन।
के यो लायक छ? हुनसक्छ यस अवस्थामा हामी यस समुदायको विकास गर्न कोशिस गर्दैछौं र केवल प्रासंगिक खाताहरू चाहान्छौं जुन फाइदा र योगदान दिन्छ। हामी ठुलो संख्याको खोजी गरिरहेका छैनौं, हामी सहि सदस्यहरू फेला पार्न र थप्ने प्रयास गर्दैछौं। हामीले बढाउने साइटले यस लगानीमा सकारात्मक फिर्ताको लागि पर्याप्त राजस्व चलाउँदैन तर हामी विश्वस्त छौं कि भविष्यमा यस्तो हुनेछ।
के तपाईंले ट्विटर मार्फत आफ्नो खाता प्रचार गर्नुभयो? के तपाइँ समान परिणामहरू पाउँदै हुनुहुन्छ?
टैग: प्रचारित ट्विटर खाताtwitterट्विटर विज्ञापनहरूट्विटर पदोन्नति
फेब्रुअरी १,, २०११ 11:१:2013 अपराह्न
यस अभियानका प्यारामिटरहरू कसरी लक्षित थिए भनेर म सुन्न इच्छुक छु। मैले फेसबुक विज्ञापनको साथ सफलता प्राप्त गरेको छु तर ट्विटर विज्ञापनको दुनियामा ठप्प छु।
केवल अमेरिका र केहि लक्षित कुञ्जी शव्दहरू, एलिसन - बाँकी अभियान केवल दैनिक बजेट सेट गर्दै यससँग चालु भइरहेको थियो।